ဘောလုံးပွဲ ကြည့်ရင်း အမှိုက်ကောက်ရအောင် လိုက်ကြမလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Environment » ဘောလုံးပွဲ ကြည့်ရင်း အမှိုက်ကောက်ရအောင် လိုက်ကြမလား
ဘောလုံးပွဲ ကြည့်ရင်း အမှိုက်ကောက်ရအောင် လိုက်ကြမလား
Posted by we R one on Oct 5, 2012 in Environment | 11 comments
ကဲ ရွာသူရွာသား အပေါင်းတို့ရယ် Suzuki Cup ခြေစစ်ပွဲ မြန်မာပွဲတွေမှာ ဘောလုံပွဲ အားပေး၇င် အမှိုက် သွားကောက်မလို့ ဗျို့ လိုက်ကြမလား..။
ဘောလုံးပွဲ ပြီးတဲ့ အချိန် ခပ်ချောချော လူငယ်လေးတွေ အက်ျ အပြာဝတ်ပြီး အမှိုက်ကောက်နေတာတွေ့ရင် အဲဒါ ကျွန်မ တို့ Myanmar Youth in Action က လူငယ်တွေပဲနော်..။ တွေ့ရင်လည်း ခေါ်ကြအုံး..။
ဘောလုံးပွဲ လာကြည့်တဲ့ ၇ွာသူရွသား တွေလည်း အမှိုက်ကူ မကောင်ပေးရင်တော့ အမှိုက်တွေကို စည်းကမ်း တကျ ပစ်ကြနော်..။ ကွမ်းတံတွေး တွေကိုလည်း ပလစတစ် အိပ်နဲ စနစ်တကျ ထားခဲ့ကြနော်.။ တောင်ထွေးမြောင်ထွေးတော့် မလုပ်ကြပါနဲ နော်..။ ကျွန်မ တို့တွေ အမှိုက်ပုန်းတွေလည်း ထားပေးထားတယ်..။ အကူအညီတောင်းတာပါ..။
ကူညီပြီးကောက်ပေးချင်တယ် ဆို၇င်တော့ ဘောလုံးပွဲ ပြီးတဲ့ အချိန် ကူကောက်ပေးကြနော်..။
အမှိုက်ပုံးတွေ များများ (များများ) ထားပေးပြီး အနှီ အဖွဲ့ကလူတွေ ကွင်းတွင်းဖြန့်ကျက်ပြီး
အမှိုက် စနစ်တကျ ပစ်တတ်တဲ့ အကျင့် ဖြစ်လာအောင် ကျင့်ယူကြည့်ကြပါလို့ နှိုးဆော် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ဗျာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုလယ်ထွန်Z ကျွန်မ တို့လည်း အမှိုက်လိုက်ကောက်တာထက် အမှိုက်ကို စနစ်တကျ စွန်ပစ် ဖို့ ပညာပေး နှိုးဆော်တာတွေ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ပါတယ်..။ လက်၇ှိ ခြေစမ်းပွဲစဉ်တလျှောက်မှာ မြန်မာဘောလုံး အဖွဲချုပ်က ကျွန်မ တို့ Volunteer တွေကို ၁၀ ယောက်ပဲ ကန့်သတ်ထားတဲ့ အခါကြတော့ လူအင်အား မမျှဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျို့.။
မီဒီယာမှာ အင်တာဗျူး လုပ်ပြီး အများသိအောင် လုပ်သင့်တယ် ထင်တယ်ဗျ..
အဖွဲ့ချုပ်က ခွင့်ပြုပြီဆိုတာနဲ့ လူသစ်ထပ်ခေါ် ထပ်အားဖြည့် ပေါ့ဗျာ..
အဲန်းနီးဝေး သာဓုပါဗျာ ..ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာကို လုပ်ကြတဲ့ လူငယ်တွေအတွက်
မြန်မာရုအင်အက်ရှင်း အဖွဲ့ ရဲ့ ကောင်းသောလုပ်ရပ်များအတွက်… ဆုတွေ ၊ စပွန်ဆာတွေ ချီးမြှင့်မယ့် သူဌေးများ ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ ပေါ်လာပါစေဗျား
တောင်းတဲ့ ဆုနဲ အမြန်ဆုံး ပြည့်စုံပါစေ ရှင်
တစ်ဦးချင်းရဲ့ အသိ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ ကွမ်းမထွေး အမှိုက်မပြစ်ကြဘူးဆို (သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာမှာ ထွေးမယ် ပြစ်ကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့)ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ….ခု့လို လူငယ်လေးတွေရဲ့စိတ်ဓါတ် ဂုဏ်ယူပါတယ် ညီငယ် ညီမငယ်တို့
လေးစားပါတယ် we R one ရေ ။ အောင်မြင်ပါစေ။
လောလောဆယ်.. မူလတန်းကလေးတွေကို မုန့်ဖိုးပေးပြီး.. အမှိုက်လိုက်ကောက်ခိုင်းဖို့ ကောင်းတယ်..
ယူအက်စ်မှာတော့.. ကျောင်းတွေက အဲလိုလုပ်ပေးကြတာများတယ်..။
(သေသေချာချာတော့မသိပေမယ့်..) ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်ရင်.. ကလေးတွေအတွက်.. ခရက်ဒစ်ရတယ်လို့ထင်တယ်..။ ကျောင်းလုပ်ထုံးမှာကို ပြဌာန်းထားတယ်ထင်မိတယ်..။
ဒါကိုကြည့်ပြီးမှ.. လူကြီးတွေ အမှားသိပြီး ပြင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်.. ကလေးတွေကြီးလာရင်လည်း.. အကျင့်ကောင်းရသွားတယ်လေ…။
Kindergarten Trash Pickup
JOPLIN, MO.—2kindergarten classes from Columbus Elementary School picked up trash, including bottles, firework remnants, and wires on the playground. The principal encouraged teachers to get the students involved with the 911 National Day of Service. They feel the cleanup teaches kids the importance of helping the environment. Teachers say it’s important to get involved with helping others early on.
“It will help them know that reaching out to others and taking care of things is responsible and helps them become good citizens,” states Jennifer Statler, Columbia Elementary School Teacher.
3rd grade students from Jefferson Elementary also picked up trash ataJoplin park
Good idea, Mr Kai!